Inta u dhaxeyso Afgooye iyo Leego maanta ka bilowday Hawlgal wado furis ah – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowladda Somaliya, ayaa maanta qaaday hawlgal loogu magac-daray wado sifayn, ka db markii jidgooyooyinku ku soo bateen wadada xiriirisa Degmooyinka Afgooye & Wanlaweyn Ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Muddooyinkii ugu dambeysay, ayaa waxaa bulshada ka soo yeeraysay qaylo dhaan ka dhan ah isbaarooyinka xargaha goystay, ee taako taakada loo soo dhigay wadada.
Ciidamada Dowladda waxaa maanta la arkaayay iyagoo roondo ku sameynaaya wadooyinka, xilli aan la soo sheegin wax isbaaro ah oo lagu arkay wadada, intii ay hawlgalka ka wadeen.
Taliyaha Guutada Lixaad Ee Ciidanka Xooga Dalka, Korneyl Axmed Maxamed Tirey Disho, ayaa xaqiijiyay inay wadada ka sifeeyen wixii jidgooyo ahaa ee horey u yaalay, sida uu yiri.
Taliyaha waxa uu carabka ku adkeeyay in hawlgalku uu sii socon doono, isla-markaana ay si joogto ihi roondo kaga samayn doonaan inta u dhaxeyso Afgooye illaa Leego.
Tirey Disho waxa uu maleeshiyada hubeysan ee jidgooyada soo dhiganaysa wadooyinka uu kaga digay in jidgooyo dambe soo dhigtaan wadadaasi, haddii kalana ay gacan adag ku wejihi doonaan, sida uu yiri.
Heshiiska Maamul U Samaynta Gobolada Hiiraan & Sh/Dhexe Oo Madaxweynaha Khudbad Kajeediyey (Daawo Sawirada)